Inja Anatomy ukusuka kwiNtloko ukuya eMsileni
NguMargaret H. Bonham
Amanye amagama e-canine anatomical anokuqheleka kuwe-izinja zinengqiniba neendlebe namehlo-kodwa amanye amagama asenokuba angaphandle ngokuthe ngqo. Amagama amaninzi achazayo asetyenziswa ukuchaza iinxalenye zenja ziyafana nezo zisetyenziselwa amahashe.
Intloko phezulu kwiindawo zenja
Ukuqala entloko, inja yenziwe
Impumlo: Iimpumlo zenja zihlala zibanda kwaye zimanzi, kwaye ke, zihlala zixinga apho zingafunekiyo.
Inkqubo ye- isicheme (intshayelelo) iqulathe imihlathi ephezulu neyasezantsi.
Inkqubo ye- yeka i-induction (ngamanye amaxesha ayikho) phakathi kwe-muzzle kunye ne-braincase okanye ibunzi.
Inkqubo ye- ibunzi (braincase) yinxalenye yentloko efana nebunzi lakho; isuka estopini nasemashiyini iye kumqolo wentloko.
ukungaziva mnandi phantsi kwembambo yasekunene
Inkqubo ye- occiput lelona nqaku liphezulu lekhakhayi ngasemva kwentloko kunye nenqaku elibalulekileyo kwezinye izinja.
Yaziwa kakuhle yintoni iindlebe zizo, kodwa izinja ezahlukeneyo zineendidi ezahlukeneyo zeendlebe, kubandakanya:
Ukukhutshwa: Iindlebe ezicoliweyo zime nkqo.
Iwile: Iindlebe eziwileyo zijinga phantsi.
Iqhosha: Iindlebe zeqhosha zinefolda kuzo.
Yaphukile: Iindlebe ezicoliweyo zitshintshwa ngotyando.
Amehlo zicacile, kwaye zihlala zicacile.
Njengabantu, izinja ziye amashiya, okanye ngokulula ukukhangela.
Iindevu bonelela ngemvakalelo ethile.
Iiflethi ligama nje elinomdla lenja imilebe.
Inja c hake Ngaba lulusu olusemacaleni embezi - malunga nokuba ziphi izidlele zakho ukuba ubunomlomo.
Ukuphazamisa intamo kunye namagxa eenja
Icandelo lentamo kunye namagxa afaka
Inkqubo ye- nape entanyeni kulapho intamo ijoyina isiseko solukakayi ngasemva kwentloko.
Inkqubo ye- umqala iphantsi kwemihlathi.
Inkqubo ye- ubume iqala ngo-nape kwaye iphele ngokubuna (jonga into yokugqibela kolu luhlu).
Inkqubo ye- intamo Uyazicacisa; ibaleka ukusuka entloko ukuya emagxeni.
Inkqubo ye- igxalaba lelona candelo liphezulu lomphetho womlenze ukusuka ekubuneni ukuya engqinibeni.
Inkqubo ye- iyabuna zezona ndawo ziphambili zamagxa, zibenza ukuba babe lelona nqanaba liphezulu ngasemva kwenja.
Ukubamba i-canine ngasemva kunye nesifuba
Umqolo nesifuba zihlangene kuba ziyinxalenye yomzimba wenja, ebandakanya:
Inkqubo ye- prosternum Ngumphezulu we sternum, ithambo elidibanisa iimbambo kunye.
Inkqubo ye- isifuba lulonke ubambo lwenja.
Inkqubo ye- umva ibaleka ukusuka egxalabeni ukuya esiphelweni sebambo. Igama elithile umva maxa wambi isetyenziselwa ukuchaza umqolo kunye nomqolo.
Inkqubo ye- esinqeni ibhekisa kwicala lenja phakathi kokuphela kwesifuba kunye nomlenze wangasemva.
Inkqubo ye- isisu okanye isisu lingaphantsi lenja ukusuka esiphelweni sebambo lalo ukuya emsileni.
initrofurantoin mono-mcr 100 mg
Inkqubo ye- kude ngumqolo phakathi kokuphela kwembambo kunye nokuqala kwethambo lethambo.
Umahluko phakathi kwemilenze yompuphu kunye nemilenze yangasemva
Ungacinga ukuba imilenze yangaphambili kunye nemilenze yangasemva yenja iya kufana, kodwa zahlukile njengeengalo kunye nemilenze yakho:
Inkqubo ye- ingalo ephezulu umphambili ulapha ngezantsi kwegxalaba kwaye ubandakanya ithambo lehumerus, elifanayo (ngegama nokuba kunjalo) kuleyo ifunyenwe engalweni yakho ephezulu. Iphela engqinibeni.
Inkqubo ye- ingqiniba lilungu lokuqala emlenzeni wenja ebekwe nje ngezantsi kwesifuba ngasemva komlenze wangaphambili.
Ithambo elide elibaleka emva kwengqiniba kumlenze wangaphambili ngu ingalo. Njengeengalo zakho, ibandakanya i-ulna kunye nerediyo. Ingalo inokuba neentsiba ngasemva.
Inkqubo ye- isihlahla lilungu elingezantsi elingaphantsi kwengqiniba engaphambili.
Ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yi iikhaphethi, iipastern ayalingana namathambo asezandleni nasezinyaweni — ngaphandle kokubala iminwe neenzwane - kwaye izinja zinayo kwimilenze yomibini nakumilenze yangasemva.
Izinja zine unyawo okanye inqina Ekupheleni komlenze ngamnye, obizwa ngokuba yi forefoot okanye unyawo lwangasemva kuxhomekeke ekubeni ingaba ngaphambili okanye ngasemva. I-paw iza nezipikili (ngamanye amaxesha zibizwa uzipho ), iiphedi zepaw, kwaye zihlala zinamabala ombethe.
Inja iinzwane zilingana neminwe neenzwane zakho, nangona ungazishukumisa ngokulula.
Iinzipho ezinqabileyo yimizila yezithupha. Kuba izinja khange ziqonde ubhontsi ochaseneyo (enkosi ngokulunga, nawe— ungacinga ukuba yeyiphi inkohlakalo abanokungena kuyo?), Ezi dewclaws zininzi okanye azincedi zizihlomelo.
idepo yedrone yezinja
Inkqubo ye- iinzwane okanye uzipho kwisiphelo sonwe ngalunye lubandakanyiwe nenxalenye yethambo lokugqibela leenzwane.
Ngaphantsi kweenyawo zininzi iiphedi, kubandakanya iphedi enye ephambili (iphedi yoluntu) kunye nephedi phantsi kwenzwane nganye, zizonke iiphedi ezintlanu. Ungazifumana iiphedi zokumisa emva kwesihlahla kwimilenze yenja yakho yangaphambili.
Inkqubo ye- ithanga eliphezulu yinxalenye yomlenze wenja emi entla kwedolo kumlenze wangasemva.
Inkqubo ye- thintela okanye idolo lilungu elihlala ngaphambili emlenzeni wangasemva ngokuhambelana nesisu.
Inkqubo ye- ithanga elisezantsi yinxalenye yomlenze wangasemva ongaphantsi kwedolo ukuya kwinqanawa (jonga into elandelayo yembumbulu). Ezinye izinja zineentsiba ngasemva kwamathanga asezantsi kunye neebhokhwe.
Inkqubo ye- hock ngu indibaniselwano emile ngendlela engaqhelekanga eyenza i-engile ebukhali ngasemva kwemilenze yenja. Iyahambelana neqatha lakho.
Ekugqibeleni, (ngakumbi ngeDachshunds kunye neBasset Hound) uza kumsila wenja. Amalungu enza ukuphela kwenja yakho yangasemva aquka oku kulandelayo:
Inkqubo ye- iqhuma (okanye croup Sisiphelo esingumzekeliso; kulapho ithambo le-pelvis likhoyo.
Inkqubo ye- iseti yomsila kulapho umsila uncamathele khona kwimpundu. Ezinye izinja zinemisila ephezulu, ezinye zinezantsi.
Wonke umntu uyayiqonda inja umsila (okanye ukungabikho kwayo); idla ngokukujiwuzisa.
yintoni i-allopurinol ye
ukucoca njani imithungo
Imagniziyam citrate ukuba isebenza ixesha elingakanani
Isisombululo se-chlorhexidine sezinja
Ndiyisebenzisa njani uber